Tayada, Qalabka Kumbuyuutarka Gawaarida Duubista Duubista, ee Lagu Sameeyay Shiinaha - Dongguan Yingjia Electronic Technology Co., Ltd
Hoyga >Alaabta >Gawaarida gawaarida lagu duubo>Rikoor laba-duube oo wadista kamarad leh
4.5 inch dvr camera
Faa'iidada barta iibinta badeecada 4.5-inch 1080P qeexitaan sare oo laba-lens baabuur leh DVR waa kamarad baabuur oo leh qiime mudnaan leh iyo shaqeyn aragti habeennimo oo qeexan.
Qalab bir ah oo buuxa HD 4-inji baabuur DVR duubista laba-lens baabuur wadista leh oo leh aragtida habeenkii oo ah fiidiyoow fiidiyoow yar oo gawaari ah, qaab-dhismeedka muuqaalka dhamaadka-sare ee jawiga-dhamaadka sare, wax walba oo keliya ayaa loogu talagalay nabadgelyadaada.
3 inch duubo kaamero mini mini ah
Gaariga sanadkaan ugu quruxda badan DVR HD aragtida habeenka gawaarida gawaarida lagu duubo 3 inch smart car video recorder 1080 kamarad gawaarida, muuqaalka waa mid fiican oo isafgarad leh, sidaa darteed ma dhigan kartid kamaradda mini-ga.
3 inch kamarad yar oo WIFI ah DVR
Qodobka iibinta badeecada ayaa leh 3 inji oo rikoodh sare ah oo duubaya wadista kamaradda DVR WIFI. APP waxay kuxirantahay duubista duubista wadista laba-kamarad, kamarad baabuur oo ka hubin karta goobta taleefanka gacanta.